Time Message Three Grade 1 Term One 2022 | Wordworks
Wakuba ugqibile ukuyisonga incwadi encinci, yityhile uze uncokole kunye nomntwana wakho ngomfanekiso ngamnye. Emva koko, funda isihloko sencwadi kunye nezivakalisi kwiphepha ngalinye. Wakhombe amagama njengokuba uwafunda. Mkhuthaze umntwana wakho ukuba abalise kunye nawe ibali ukuba uyafuna.
Xa ugqibile ukufunda, mbuze umntwana wakho ukuba yiyiphi eyona nto ayithande kakhulu kule ncwadi. Ngokutyhila incwadi, utsho afunde ukuba kunjani ukuba ngumntu ofundayo!